Vivaldi 3.5 inovandudza matabhu, kutamba uye inowedzera QR kodhi | Linux Vakapindwa muropa
Pakupera kwaNovember, Jon von Tetzchner, CEO weVivaldi Technologies, akaburitsa tsamba yakazara achitaura nezve dzimwe nhau dzinonakidza dzaizouya pamwe Vivaldi 3.5. Kunyanya, takaudzwa kuti iyo nyowani vhezheni yaizosvika nevatengi veemail, karenda uye mafidha (nhau) dzakabatanidzwa mubrowser, asi iyo vhezheni yakatoburitswa uye, semubeta (snapshot), haigadziriswe nekutadza. Kutaura chokwadi, kunyangwe neshanduro yeManjaro yekugadzirisa, ini handina kana kukwanisa kutarisa kana ichigona kuvhurwa, asi zvingangoita.
Muchokwadi, mune yeVivaldi 3.5 kuburitsa chinyorwa havataure chero chinhu nezvevatengi vatatu ava, uye kana vasingataure chero chinhu ivo havagone kutsanangura kuti vakaitwa kubva vivaldi: // kuyedza. Hongu vatsanangura iyo Nhau dzakauya pamwe neichi chiitikoIvo havana imwe sarudzo, uye ino nguva pane mabasa akatanhamara, asi asingasviki mune mimwe mwedzi uye, hongu, kupfuura iwo evatengi vambotaurwa.
Chii chitsva muVivaldi 3.5
Tab manejimendi manejimendi, sekukwanisa kuvhura matabhu kumashure nekumisikidza kana kuenzanisa tabo zvakare kumashure.
Kutamba kwekuvandudza, uye mapeji ayo aimboita mushe nekuda kweWidevine DRM zvino achadaro.
Kugona kugovana mapeji neQR kodhi jenareta.
Menyu kugadzirisa maitiro.
Imwe-kiyi nzira pfupi yekuvandudza.
Sarudzo nyowani yekushandura zviri nyore pakati pemitauro pamapeji anoibvumira, iyo yatinoshandisa inopfuura mutauro mumwe.
Yakagadziriswa kutonga pakusarudza zvekunze zvinhu.
Sarudzo yakawedzerwa kuitira kuti bhatani rekuvhara ma tabo rigare richioneka.
Vashandisi vanofarira kuisa Vivaldi 3.5 vanogona kuzviita nekuzvirodha pasi kubva Iyi link. Mune masystem senge Ubuntu inowedzera iyo yepamutemo repostory mushure mekumisikidza, saka kugadzirisa kwave kuwanikwa. Mune zvimwe zviitiko, senge Manjaro, inowanikwa munzvimbo dzepamutemo, saka isu tichafanirwa kumirira kwenguva yakati rebei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Vivaldi 3.5 inovandudza matabhu, kutamba, inowedzera QR kodhi, asi haina kumisikidza iwo matsva mabasa nekutadza
Zvinoitika kwandiri naVivaldi sekune Edge, iwo mabhurawuza andinoda (kutaura zvazviri ini ndinoshandisa Edge mukati Windows 10), asi ini handifunge nezvavo muLinux kana Android kusvikira, zvirinani, vari 100% yakavhurwa sosi . Kunyanya kana ini ndine dzimwe nzira dzakavhurika sosi dzakaenzana kana dzinovapfuura.